नबिल बैंकको रु. ३ अर्बको ऋणपत्रमा आजबाट आवेदन खुला, कति पाइन्छ ब्याज ? Bizshala -
काठमाण्डौ । नबिल बैंकको ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रमा आज साउन १० गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ।
बैंकको ‘८% नबिल डिबेन्चर २०८५’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरिएको हो। बैंकले १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल ३० लाख इकाइ निष्कासन गरेको छ।
कुल इकाइमध्ये१८ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट र बाँकी १२ लाख इकाइ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको छ। सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिने कुल १२ लाख इकाइमध्ये पनि ५ प्रतिशतले हुन आउने ६० हजार इकाइ सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी ११ लाख ४० हजार इकाइमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्।
यो ऋणपत्रको निष्कासन बन्द छिटोमा साउन १३ गते र ढिलोमा साउन २४ गते हुनेछ।